Faa'iidooyinka Samaynta Shaqada Samafalka | Martech Zone
Faa'iidooyinka Samaynta Shaqada Samafalka
Talaado, Febraayo 1, 2011 Talaado, Febraayo 1, 2011 Douglas Karr
Dadka qaarkood waxay u ordaan si kale markii la weydiisto inay qabtaan sadaqo. Qofna ma doonayo inuu ku qaato galab, maalin, ama isbuuc dhammaadkiisa nolol maalmeedkiisa. Waxay aad u mashquulsan yihiin, ama kaliya ma doonayaan inay waqti u huraan wax aan uga faa'iideysanayn si uun. Sababtoo ah mushahar lagaa siin maayo shaqada aad qabanayso, macnaheedu maahan inaysan jirin wax faa'iidooyin ah.
Dhowr usbuuc dhammaad ka hor, waxaan qaatay 48 saacadood oo dhan, aniga iyo koox kale, waxaan u dhisayay degel si buuxda u shaqeynaya urur aan faa'iido doon ahayn. Munaasabadan ayaa loogu magac daray Refresh Weekend waxaana isku soo dubariday Justin Harter. Toddobaadkaas dhammaadkiisa, afar hay'adood oo samafal oo kala duwan ayaa la siiyay websaydhyo cabsi badan oo gebi ahaanba ku habboon urur kasta oo uu u baahan yahay.
In kasta oo aan wax mushaar ah la siin 48-daas saacadood, haddana waa kan sida aan uga faa'iideystay dhacdada:
Isku xirka Uber - Waxaan la kulmay horumariyayaal badan, nashqadeeyayaal, iyo sawir qaadayaal at Refresh Weekend. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu lahaa xirfad u gaar ah oo ay miiska keeneen. Kuwaas oo dhammaantood ah kuwa hadda jira kuna habboon mihnadda aan ka shaqeeyo. Ma ahayn oo keliya in aan maqlay dadkan oo ka hadlaya waxa ay noloshooda u qabtaan, laakiin waxaan awooday inaan arko iyagoo hadalka sii socda. Hadda waxaan haystaa dammaanad qaad in shakhsiyaadkani ogyihiin waxa ay sameynayaan. Faa'iidadan oo keliya ayaa ah mid aan la beddeli karin.
Kickback - Markasta oo hay'ad samafal oo weyn ay dhacdo, sida caadiga ah waxaa jira war-saxaafadeed ama nooc nooc ah. Hal mar, magacaaga ayaa la aqoonsaday oo shaqadaada ayaa lagu soo bandhigayaa. Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan laaluushka sadaqada ayaa ah inay u badan tahay inay ka imaaneyso dhagaystayaal aadan horay u gaari karin. Adoo dooranaya inaad caawiso sadaqo, waxaa macquul ah inaad kasbato dhagaystayaasha shabakada sadaqada.
Kaliya Waxay Dareysaa Wanaag - Waxaan dareemayaa dareen cabsi leh oo dhab ah markii aan caawiyo qof runtii u qalma. Waxaan u arkaa dareenkan inuu yahay mid ay adag tahay in lala yimaado. Way kafiican tahay daawashada kuwa aad jeceshahay inay furaan hadiyadaha aad ku iibsatay subaxnimadii Kirismaska. Adduunyadu way ka sii adkaan laheyd sadaqo la'aan iyo wax bixin la'aan. Waxaa laga yaabaa inaadan mushahar ku qaadanayn shaqadaada, laakiin weli waxaa jira faa iidooyin laga helayo sidaas.
Adeegga Emailka fudud ee Amazon - SMTP ee daruuraha
Geotoko: Ololeyaal Meelo Badan Ku-saleysan Ololeyaal
Feb 1, 2011 markay ahayd 3:00 PM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, Stephen, runtiina waan ku faraxsanahay inaad qayb ka tahay DK New Media iyo ka caawinta mashaariicda sidan oo kale ah. Waxaan ku dari lahaa inay jiraan fursado ganacsi oo weyn ururada samafalka sidoo kale - hogaamiyaasha ganacsiyada badanaa waxay la xiriiraan shirkadaha ay ogyihiin inay yihiin sadaqo.
Apr 5, 2011 at 1: 16 PM
Runtii waxaan kaqaybqaatay sadex jeer anigoo shaqooyin iskaa wax uqabso ah usameynaya qaar kamid ah hay'adaha samafalka ee aanan rabin inaan xuso magacyada. Dareenku waa mid caadi ah oo qurux badan. Ma jiraan wax lacag ah oo halkaa ku yaal oo waa inaadan ka fileynin meesha ugu horeysa. Waxa muhiimka ah ayaa ah inaad awood u leedahay inaad kaqeyb gasho maadaama uusan qof kastaa sameyn karin taas wuuna qaddarin karaa taas. Haddii aad rabto inaad wax-soo-saar badan u yeelato kuwa kale maxaa diiday inaad waqti ku qaadatid sameynta howlaha samafalka.
Gaadhi Ugu Deeqo
Wheels Wixii Rajo